Shir ka furmay Muqdisho iyo Xaaladda siyaasadda dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Shir ka furmay Muqdisho iyo Xaaladda siyaasadda dalka
Waa wajiga labaad ee kulanka Gudiga farsamada ee dhawaan ku kulmay magaaladda Baydhabo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa saakay oo Khamiis ah Decale hotel oo ku yaalla Garoonka diyaaradaha Muqdisho ka furmay shir ay isagu yimid gudi farsamo oo ka kooban wakiilo ka socda Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada.
Kulanka oo noqonaya kii labaad ayaa waxaa lagu gorfeynayaa qodobada khilaafka ka taagan ee doorashadda oo gudiga ka doodayo qaabkii lagu xalin lahaa, iyagoo u gogol-xaaraya Shirka Farmaajo iyo Madaxda Maamullada oo Axada soo socota ka furmi doono Afisyooni.
Sii hayaha Wasiirka Dastuurka Saalax Axmed Jaamac ayaa gudoomiye u ah gudiga, oo bishii lasoo dhaafay shirkii ugu horeeyay ku yeeshay Baydhabo, kaasoo ay kasoo saareen qodobo lagu xalin karo khilaafka doorashadda.
Waxaa lagu wadaa in gudiga uu kulankiisa kasoo saaro go'aanno ajande u noqon kara Madaxda shirka yeelanaysa 21-ka bishaan, waxaana la ogeyn in Farmaajo uu sameyn doono tanaasul, maadaama ay isaga u xayiran tahay doorashadda dalka.
Soomaaliya waxay ku jirtaa hadda marxalad kala-guur ah, iyadoo aan la qaban doorashadda waqtigii loogu tala galay, waxaana meesha ka baxday dowladdii sharciga ahayd oo waqtigeeda dhamaaday, iyadoo aan la dooran midi beledeli lahayd.
Siyaasadda gurracan ee Farmaajo ayaa laga dhaxlay xaaladda maanta taagan, isagoo waqtiga uga lumiyay shacabka khilaafyo siyaasadeed iyo duminta maamul Goboleedyadii dhisnaa.